Abiy Ahmed iyo mustaqbalka Ethiopia | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Abiy Ahmed iyo mustaqbalka Ethiopia
Maaddaama dagaal dilaa ah oo u dhexeeya ciidamada dawladda federaalka iyo xoogagga gobolka Tigreega uu sii xoogeysanayo, masiirka dalka.
Raiisel wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu haystaa dhakhaatiirta caafimaadka iyo nabad galyada wuxuuna soo noqday nabad ilaaliyaha Qaramada Midoobay ee Rwanda sanadii 1995
Markii uu xukunka la yimid mowjad rajo leh bishii Abriil 2018, Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaa xilligaas si taxaddar leh loogu arkay inuu daaweyn u yahay tobanaan sano oo xukun hal-xisbi wax ku ool ah leh barnaamijkiisii ​​ballanqaadka ahaa ee dib-u-habeynta xag-jirka ah.
Laakiin hadda, iyada oo ku dhowaad laba toddobaad oo dagaal lagu hoobtay u dhexeeyay dawladda federaalka iyo hoggaan diineed waqooyi ah oo tobannaan sano xukumayay siyaasadda Itoobiya ay sii xoogeysanayso, mustaqbalka waddanku wuxuu isu dheellitirayaa mindi
Qaxootiga Itoobiya waxay ka carareen ‘xasuuqii’ ka dhacay Tigray
Ismariwaaga ka taagan waqooyiga gobolka Tigray ayaa bilaabmay isla markii uu Abiy xilka qabtay kadib markii mudaharaadyo waawayn ay ku qasbeen Hailemariam Desalegn – ra’iisalwasaaraha go’doomay dalka ahna gudoomiyaha xisbiga shucuubta kacaanka shacabka Itoobiya (EPRDF), isbahaysiga xukuma afarta xisbi ee Tigreegu hogaamiyo. inuu is casilo bisha Febraayo 2018.
Kadib todobaadyo wadahadalo qarsoodi ah oo ka dhex socday EPRDF, Abiy waxaa la rumeysan yahay inuu ka adkaaday diidmadii uga imaan jirtay kooxdii horey u maamuli jirtay ee Tigray People’s Liberation Front (TPLF) si uu ugu guuleysto gudoomiyaha xisbiga EPRDF oo uu noqdo, 41 jir, hogaamiyaha ugu da’da yar Afrika iyo kan ugu horeeya ee Itoobiya ee ka socda gobolka Oromiya.
Magacaabista Abiy – aasaasihii Shabakadda Macluumaadka iyo Nabadsugida ee dalka, wasiirkii hore ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda iyo gaashaanle dhexe hore ee ciidanka – ayaa loo arkay mid muhiim u ah joojinta qalalaasaha ka dhex aloosan qowmiyadda Oromada, oo ah qowmiyadda ka dambeysa sannadihii mudaaharaadyo dowladda looga soo horjeeday oo horseeday kumanaan qof.
“Dhibaatooyin badan ayaa jiray kahor Abiy inta uusan raiisul wasaare noqonin, midka ugu weyn ayaa ah awood la’aanta dowladda ee gaarsiinta balanqaadyada horumarka,” ayuu yiri Daniel Mulugeta, oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Itoobiya kana tirsan London’s School of Oriental and African Studies. “Abiy wuxuu ka faa’iideystay garoomadaas siyaasadeed. Wuxuu balanqaaday inuu bogsiin doono kala qaybsanaanta dalka ka jirta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuuna u soo baxay inuu noqdo iftiin rajo u leh dhamaan Itoobiyaanku waqtigaas. ”
William Davison, oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan Itoobiya kana tirsan Kooxda Caalamiga ee Xasaradaha (ICG), ayaa yidhi “waa muhiim in la fahmo in EPRDF qirtay in ciyaartu bilaabantay isla markaana aysan awood u lahayn inay ku burburiso dhaqdhaqaaqan mudaaharaadka qaabkoodii caadiga ahaa, sidaa darteedna ay tahay geedi socod dib u habeyn iyo xureyn siyaasadeed ayaa la bilaabay ka hor inta uusan Abiy Ahmed xafiiska imaan ”.
Calaamadihii ugu horreeyay waxay ahaayeen horumar muuqda, iyadoo ra’iisul wasaaraha cusub uu dardargeliyay tallaabooyinka dib-u-habeynta ee lagu dhawaaqay maalmihii dhimanayay ee dowladdii isaga ka horreysay. Markii uu qabtay xafiiska, Abiy wuxuu sii waday inuu qaado xaaladdii degdegga ahayd ee Itoobiya, wuxuu amar ku bixiyay in la sii daayo maxaabiista iyo inuu xirnaado boqolaal boggag internet iyo kanaalo TV ah, halka u dhaqaaqistiisa nabadeed ee nabadgelyada uu la yeeshay dalka ay deriska yihiin ee Eritrea ay keentay in la siiyo abaalmarinta Nobel Peace Prize ee 2019.
Dib u habeyn dheeri ah oo lagu xoreynayo waaxda isgaarsiinta, kobcinta maalgashiga dhijitaalka ah iyo hagaajinta sharciyada warbaahinta, xuquuqda aadanaha iyo la dagaallanka argagixisada ayaa sidoo kale ku kasbaday ammaan ballaaran.
Si kastaba ha noqotee, qorshayaashaas dhaqaale noqotee, weli ma aysan midho dhal u noqonin waddanka ay ku noolyihiin qoomiyadaha kaladuwan ee 110 milyan, oo ah qofka labaad ee ugu dadka badan Afrika, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in taageerada Abiy ay bilaabatay inay yaraato iyadoo ay sii kordheyso xiisadaha qowmiyadeed, saboolnimada sii socota iyo saameynta ugu dambeysay ee daadadka ba’an duulaan ayax iyo faafin coronavirus.
“Marka ay timaado tirada muhiimka ah, wuxuu luminayaa taageerada,” ayuu yiri Mulugeta. “Abiy uma muuqdo inuu leeyahay ajande siyaasadeed oo aad u cad. Wuxuu doorbidaa mashaariic horumarineed deg deg ah oo deg deg ah oo ka farxiya kuwa raacsan. Isagu waa waxqabad. Waxa aad ku aragtaan isaga waa waxa aad ku aragtaan hoggaamiyeyaasha caanka ah sida Boris Johnson iyo Donald Trump. ”
Isku soo wada duuboo, sanadkii tan iyo markii uu Abiy noqday abaalmarinta Nobel, boqolaal Itoobiyaan ah ayaa ku dhintey isku dhacyo rabshado wata oo ay la galeen ciidamada amniga ama u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya. Waxaa xusid mudan, dilkii bishii Juun loo geystay fannaanka caanka ah ee Hachalu Hundessa, oo ahaa nin u ololeeya qowmiyadda Oromada, ayaa horseeday mudaaharaadyo lagu hoobtay. Kumanaan siyaasiyiin ah, kuwa u ololeeya mucaaradka iyo mudaaharaadayaasha dowladda ka soo horjeeda, ayaa dhanka kale la xiray.
“Waxaan u maleynay inuu noqon doono shaqsi mideeya bulsho aad u kala jajaban,” ayuu yiri Tsedale Lemma, oo ah tifaftiraha guud ee wargayska Addis Standard, oo daabacay luuqada Ingriiska ee Itoobiya. “Laakiin wuxuu ahaa mid go’aan dilaa ah ka dib mid kale. Isagu ma aha nabad doon oo sidaas oo ay ahayd isku dheelitir la’aan. ”
Laakiin dadka qaar ayaa ku doodaya in gacan ka hadalka uu qeyb ka yahay dhaqdhaqaaqyadii hore ee Abiy ee furitaanka iyo in la sii daayo mucaaradka Itoobiya iyo kooxaha kacdoonka, loolanada mudada dheer la xakameynayay ee gobolada sida Amxaarada, Oromiya iyo Tigray ayaa la furay.
Asnake Kefale, oo ah kaaliyaha borofisarka cilmiga siyaasada ee jaamacada Addis Ababa ayaa yidhi “Wuxuu isku dayay inuu qabto meel dhexe, isaga oo ka fogaanaya jagooyinka siyaasadeed ee xagjirka ah”. “Qowmiyado-qowmiyadeed waxay ahaayeen dhammaadka muuqaalka iyo Itoobiya-diidka dhinaca kale. Laakiin qowmiyado-qowmiyadeed waxay ku eedeeyeen inuu bartilmaameedsaday iyaga oo dhibaatooyinkuna ay bilowdeen
Dadkii ku eedeeyay Abiy inuu si cadaalad daro ah u bartilmaameedsaday waxaa kamid ahaa kooxda TPLF maadaama Abiy bilaabay inuu xukunka kaqaado qoomiyada Tigreega xilalka sare ee hogaaminta, oo ay kamid yihiin militariga iyo laamaha amaanka. Kadib TPLF waxay kabaxday EPRDF kadib markuu Abiy kudhex daray Xisbiga Barwaaqada ee dhawaan lasameeyay.
Xiisadu waxay gaadhay meel aad u toos ah markii Abiy uu dib u dhigay doorashooyinka qaranka ilaa sanadka dambe sababo la xiriira masiibada iyo Tigray oo sii waday in ay yeelato codkeeda deegaanka bishii Sebtember inkasta oo xukuumada dhexe ee Addis Ababa ay u aragtay mid sharci daro ah.
Abiy ayaa kajawaabay ku dhawaaqida xaalad deg deg ah 4tii Nofeembarna wuxuu hawlgal militari ka bilaabay Tigray kadib weerar la sheegay in lagu qaaday xero ay leeyihiin ciidamada federaalka. Toddobaadkii la soo dhaafay Amnesty International waxay sheegtay in dad badan oo rayid ah lagu dilay “xasuuq” ka dhacay Tigray taas oo markhaatiyaal lagu eedeeyay xoogaggii taageeray TPLF kumanaana ay u qaxeen Suudaan iyadoo ay sii kordhayaan masiibada bani’aadamnimo.
Aragtida waxay uqeybsantahay ilaa iyo intee in leeg Abiy eedda looleeyahay sii hurinta rabshadaha Tigray. “Aragtidayda, lix ilaa toddobo bilood ayuu Abiy u dulqaadanaayay iskuna dayayay inuu iska ilaaliyo iska hor imaad militari,” ayuu yiri Kefale, oo ka tirsan jaamacadda Addis Ababa.
Laakiin falanqeeyayaasha kale ayaa ku qanacsan. “Tani maahan wax dhan oo ra’iisul wasaaraha, si kasta ha noqotee, laakiin waxaan arki karnaa dhinacyo aan si wanaagsan wax looga qaban,” ayuu yiri Davison-ka ICG. “Abiy wuxuu umuuqdaa inuu isku halleynayo xukunkiisa halkii uu ku tiirsanaan lahaa go’aan qaadashada dheer. Waxaa laga yaabaa in taasi aysan isku dhiibaynin habka wadajirka ah ee dowladda ee calaamadeyn doona bixitaanka xagjirka ah ee Itoobiya.
Dadka wax naqdiya waxay ku doodayaan in si loo daweeyo kala qaybsanaanta ka jirta dalka oo dhan, Abiy waa inuu u beddelaa qaabkiisa xukun si uu uga qayb-galo oo u carqaladeeyo dadaalladiisa uu ku doonayo inuu meel u dhigo. “Waa daqiiqad xisaabeed,” ayuu yiri Lemma, oo ka tirsan Addis Standard. “Wuxuu ubaahan yahay inuu fududeeyo wadahadal loo dhan yahay. Taasi waa sida ay tahay inay dowlad ugu shaqeyso waajibaadkeeda.
Waxa hubaal ah in Abiy uu ku guuldaraystay inuu nabad ku soo dabaalo guriga wuxuu dhalinayaa su’aalo ku saabsan awoodda ay Itoobiya u leedahay inay ku kobcdo dhaqaale ahaan iyo inay si nabad ah ugu gudubto dimuqraadiyadda qaabkii ay qaar ku riyoodeen laba sano iyo badh ka hor.
“Colaada Tigray waxay carqaladeyneysaa mustaqbalka dalka,” ayuu yiri Mulugeta, oo ka tirsan SOAS. “Dagaalku wuxuu u badan yahay inuu kordhiyo awooda Abiy isla markaana uu dalka ka abuuro kala furfurnaan badan. Waxaan ka walwalayaa inay tani abuuri karto masiibo bani’aadamnimo.
XIGASHO: AL JAZEERA
Previous articleTaliyaha Ciidanka Jen Odawaa oo Awoodiisa hoos loo dhigay
Next articleJenaraal Maxamed Tahliil Biixi waa kuma muxuusa ahaa Dowladii Siyaad Bare
War deg ah Qaraxweyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Magaalada Muqdisho ayaa wax yar ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho kaa sida la sheegay ah mid Gilgilay inta badan Wali macada Cida lala eegtay...
Warar kala duwan oo ka soo baxaya Qarax Ciidamada Dowlada lagula...